शीर्ष 8 भारत आकर्षक तलब संग क्यारियर विकल्प
कलेज, लेख, निबन्ध & रिजुम, लेखन सुझाव
एक काम को लागि बाहिर देख अघि, सबैलाई साधारण ठान्नुहुन्छ भन्ने एउटा कुरा मुद्रा वा तलब छ. हो, आवेग सफलता तर दिन को अन्त मा जान्छ के हो, जब तपाईं घर फिर्ता थकित जाने, तपाईं आवश्यक सबै केही सान्त्वना र लक्जरी छ. त्यसैले, यसलाई जहाँ तपाईं बरु सानो लक्ष्य सेट भन्दा सान्त्वना सबै सामाग्री किन्न सक्छन् ठूलो उचाइ आफ्नो लक्ष्य राख्न राम्रो सधैं छ. त्यहाँ कि तलब साथ भत्तों को धेरै साथ केही जब छन्. Following isalist of some of the top career options that would support you efficiently both financially and prestige wise.
हालको व्यापार पुस्ताहरू, उच्च प्रतिष्ठा व्यवस्थापन र multitasking कौशल संग मान्छे को लागि बनाइयो छ. यो प्रविष्टि स्तर मा एक धेरै खुसी यात्रा छैन. तथापि, जब तपाईं उच्च जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रिया लाग्न गर्न कदम, आफ्नो तलब बढ छन्. आवश्यकता सबै एक प्रसिद्ध संस्थान देखि एक व्यवस्थापन डिग्री छ. यो कसरी CEOs हाल थोक मा पैसा कमाउन छ. कम्पनीहरु पनि आफ्नो तलब साथ विभिन्न भत्तों प्रदान गर्ने जाने.
डाक्टर आपतकालीन अवस्थाको सबै प्रकार मा आवश्यक छ र आफ्नो कौशल समाज मा उच्च मूल्य छ. एक पटक तपाईं चिकित्सा महारत छ, जहाँ परामर्श शुल्क एक ठूलो रकम सम्म आउँछ तपाईं आफ्नो निजी क्लिनिक सुरु गर्न अगाडि जान सक्छ. एक डाक्टर हुनुको मात्र तपाईं पैसा ल्याउन छैन तर पनि समाजमा प्रतिष्ठा को धेरै तपाईंलाई इनाम दिनुहुन्छ. चिकित्सा पेशेवरहरुलाई विभिन्न विभाग को हो, उदाहरण को रुपमा, दन्त चिकित्सक, ophthalmologists आदि.
आईटी उद्योग हाल booming छ. प्रविधि हरेक मार्गदर्शन गतिविधि प्रतिस्थापन संग, आईटी समाधान एक विशाल मांग गर्दै छन्. त्यहाँ सफ्टवेयर र कम्प्युटर आधारित आवेदन यी दिन निर्भरता धेरै छ. त्यसैले, त्यहाँ एक गांठ योगफल कमाउन मौका धेरै छ.
चार्टर्ड लेखा र CFAs
लेखा हरेक दृढ मा एक आवश्यक तत्व हो. तपाईं धेरै रूपमा भुक्तानी प्राप्त यो संगठन को महत्वपूर्ण आवश्यकताहरू मध्ये एक छ रूपमा माग रूपमा. आफ्ना पुस्तकहरू जस्ताको तस्तै राख्न, लेखापरीक्षण आवश्यक छ र योजना सिस्टम को एक प्रमुख भाग वार्षिक वित्तीय योजना छ. यसैले, कैस र CFAs उद्योग मा एक विशाल स्कोप छ.
व्यापार सम्झौताहरू विभिन्न स्थानहरू मा छाप छन्, किन त्यहाँ दुवै व्यवसायी लागि आवश्यक छ र सामान्य मान्छे एकदम अक्सर उड गर्न जो. तिनीहरूले उडानहरू मा एक ठूलो रकम खर्च गर्न तयार छन्. एयरलाइन क्षेत्र अकल्पनीय गति booming छ. त्यसैले, पाइलटहरूले, उडान परिचारक, जमीन कर्मचारी, हावा hostesses आदि मांग गर्दै छन्.
मनोरञ्जन शीर्ष मा छ र एक सम्पूर्ण रूपमा अर्थव्यवस्था एउटा ठूलो सम्झौता योगदान जो एक उद्योग छ. अचम्मको मात्रा र अभिनेता जस्तै पेशेवरों संग आकर्षण उद्योग सम्झौताहरू, मोडेल, कलाकारहरूको विज्ञापनहरु मार्फत उद्योग मा आफ्नो भूमिका अलग्गै धन को एक विशाल सम्झौता amass. एक पटक तिनीहरू लागि एक तरिका गरेका छन्, आकाश आफ्नो सीमा छ.
यति धेरै रोकिएको अवस्थामा साथ, वकिल ठूलो माग पनि हो. व्यवस्था तपाईं सही बाटो रोज्न र आफ्नो सिद्धान्त लीन यदि जो एक क्षेत्र हो, तपाईं धन र सन्तुष्टि दुवै कमाउन अन्त. तपाईं भ्रममा हुन सक्छ जब पटक हो. यसलाई सामना गर्न पाएपछि गाह्रो छ. तथापि, तपाईं सम्मान संग सम्मानित प्राप्त, लाभ र पैसा दिन को अन्त मा.
खेल सबैका लागि एक कप चिया छैन. तर तपाईं प्रतिभाशाली छन् भने र राम्रो खेल कौशल सही तपाईंको बाल्यकाल देखि प्राप्त, तपाईं बस क्षेत्रमा आफैलाई लागि पहिचान बनाउन छ. यो एउटा सजिलो काम छैन, इमान्दार हुनु पर्दा. तर, तपाईंले क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन, तपाईं बस तपाईं प्ले खेल बाट तर पनि विज्ञापनहरु र विज्ञापन गरिरहेको पैसा कमाउन. यो पनि एक धेरै राम्रो तरिका ख्याति निम्त्याउँछ.
माथिको शीर्ष छन् 8 तपाईं एकै समयमा आकर्षक तलब र प्रतिष्ठा आशिषित छन् जसमा क्यारियर विकल्प. तथापि, मेहनत को धेरै, समर्पण र सही बाटो निम्न आवश्यक छ.
« खुसी अष्ट्रेलिया दिन 2018 इच्छा, उद्धरण, एस एम एस, सन्देशहरू, तस्बिरहरू, वेशभूषा
मनसुन मौसममा पानी लग समस्या बारे सम्पादक गर्न पत्र »
5औं मार्च, 2018 Sankashti Chaturthi Moonrise समय भारत मा (चन्द्र समय उठेर5मार्च)
Sridevi निबंध, जीवनी, प्रोफाइल, परिवार, सुपर हिट सिनेमा, निधन (Shridevi बलिउड अभिनेता)
लोकप्रिय कलेज अन्तर्गत ड्यू (विश्वविद्यालय दिल्ली)
विश्व एड्स दिवस – डिसेम्बर 1, 2017 : निबन्ध, विषय, Slogans, उद्धरण, सन्देशहरू, कसरी मनाउन, भाषण
मनसुन मौसममा पानी लग समस्या बारे सम्पादक गर्न पत्र
© 2018 · कुनै वेग · द्वारा डिजाइन Charmin पटेल.